Iindaba -Izinto ezifuna ingqalelo ekusetyenzisweni komqokeleli wecartridge wothuli
1. Phantsi kokusebenza kwesiqhelo, kuba kunokubakho umngcipheko womlilo obangelwe ziintlantsi embindini womqokeleli wothuli, kufanelekile ukunqanda ukuzisa iimpundu zecuba, izibane kunye nezinye iirabha okanye izinto ezinokutsha kwizixhobo ezingqongileyo ngexesha lokusebenza.
2. Emva kofakelo lwezixhobo, izixhobo mazitshekishwe ukujonga ukuba akukho ndawo kuvuzayo na. Ukuba kukho ukuvuza komoya, kufuneka kusonjululwe ngexesha ukunqanda ukuchaphazela ukusebenza kothuli.
3. Emva kofakelo lwezixhobo, qala ujonge ukuba uqhagamshelo lomgca luchanekile, kwaye ungeze ioyile yokuthambisa kwindawo nganye yezixhobo, vavanya ngokulula ukuba ngaba icandelo ngalinye linokusebenza ngesiqhelo, ukuthintela ukonakala kweendawo.
4. ICartridge yokuhluza kwindawo yokuqokelela uthuli umqokeleli wecartridge yeyamalungu abuthathaka. Kufuneka ihlolwe rhoqo.
Ekusebenzeni kwesiqhelo somqokeleli weplse wokucoca ulwelo, okokuqala, amasuntswana aqulathe uthuli aya kuba nomoya womoya ongaphezulu ngqo ezantsi kwezixhobo zokulungiselela uthuli, kwaye ke ukuhamba komoya kuya kungena ngqo kwigumbi lothuli lwebhokisi ephezulu Ukusuka ezantsi, kwaye amasuntswana othuli olungelungendawo aya kufakwa kumphezulu wecebo lokucoca ulwelo kwakhona. Irhasi ecociweyo ecocekileyo idlula kwisilinda sokucoca kwaye ingene kwigumbi lomoya elicocekileyo lomzimba webhokisi ephezulu kwaye ikhutshelwa ngqo kwiatmosferi ngezibuko lokukhupha.
Ingqokelela yothuli, I-Fibreglass yeenaliti-Isihluzi seFilter yeFilter, Isamente Uqokeleli Uthuli, Uhlobo lweBhegi luQokelele uthuli, Isihluzi seFelt Bag, Ipholiyesta yePhepha leenaliti-eziQhelekileyo,